DeFi: Ego adighi, Nke mepere emepe Ego; Site na Linux
DeFi: Ego etinyere, ego mepere emepe
Nyaahụ anyị wepụtara 3 na-akpali ngwa nke Meghee Isi mmalite nzube abuo, ya bu, ha mere dika Ozi ngwa ngwa y Digital ugwo usoro con Teknụzụ Blockchain. Ya mere, taa anyị ga-ekwu ntakịrị banyere ya Defi o Ego a gbasaara, ebe ọ bụ na ọ bụ echiche dị na ya.
Na mgbakwunye, DeFi bụ a teknụzụ na-ewu ewu emeghe nke a na-eme gburugburu na nso nso a teknụzụ blockchain banyere ụwa ego, na kwa ụbọchị na-esiri ike karị n'ihi ịrị elu nke Ego, na mkpa ọ dị Digital ugwo usoro y azụmahịa ego ntụkwasị obi, ngwa ngwa, nchebe na nzuzo.
N'oge ole na ole ndị ọzọ, anyị emetụla isiokwu nke Cryptocurrencies, Blockchain na FinTech, ebe ọ bụ na ndị a niile teknụzụ ọhụrụ sonso a afọ iri ma ọ bụ obere afọ gara aga, na-adabere na mmepe nke Software Nwepu y Meghee Isi mmalite.
Mgbe, oge a anyị ga-ekwu maka Defi nke bụ ihe na-adịbeghị anya. Agbanyeghị, maka ndị chọrọ inyocha akwụkwọ ndị metụtara ya Cryptocurrencies, Blockchain na FinTech anyị hapụrụ gị ihe ndị a:
Akụ Crypto na Cryptocurrencies: Gịnị ka anyị kwesịrị ịma tupu iji ha?
Ngọngọ, Cryptocurrencies na Telecommuting: Outlook for 2020
Latin America na Spain: Mmemme Blockchain na Cryptocurrencies
Crypto-Anarchism: Sọftụwia Ego na Ego Nkà na ụzụ, Ọdịnihu?
"Teknụzụ Ego, nke ana akpọkarị "Teknụzụ Ego" ma ọ bụ FinTech, bụ echiche aha ya sitere na mkpirisi okwu bekee "Financial Technologies". Ọ na-ezo aka na teknụzụ ọgbara ọhụụ niile ndị otu (ụlọ ọrụ, azụmaahịa na ụlọ ọrụ), ọha na eze na nkeonwe, na mpaghara ọ bụla (ọrụ ego, azụmahịa, teknụzụ na mmekọrịta ọhaneze) iji mepụta ma nye ngwaahịa, ngwaahịa na ọrụ ọhụụ." Akụ Crypto na Cryptocurrencies: Gịnị ka anyị kwesịrị ịma tupu iji ha?
1 DeFi: Ego adighi
1.1 Kedu ihe bụ DeFi?
1.2 DeFi na Open Source
1.3 Mara ihe…
DeFi: Ego adighi
Kedu ihe bụ DeFi?
Ọtụtụ oge, okwu a na-agbagwoju anya FinTech, nke edere n'elu, na okwu a Defi, nke anyị ga-ekwu n'okpuru na nkenke, dị ka ndị a:
"Mkpebi okwu nke «Decentralized Finance». DeFi bu ebumnuche na / ma obu teknụzụ nke gunyere ojiji nke otutu DApps (Ngwa agbachitere) nke ebumnuche ya bu inye oru ego nke blockcheni kwadoro, n'enweghi ndi ozo, ya mere na onye obula nwere njikọ canntanetị nwere ike sonye." Fuente.
Mgbe, n'uju, ị nwere ike ịkọwa ihe kachasị mkpa banyere Defi, dị ka ndị a:
"Otu ngagharị na-akwalite iji netwọkụ enweghị usoro na sọftụwia mepere emepe iji mepụta ọtụtụ ụdị ọrụ ego na ngwaahịa. Ebumnuche ahụ bụ ịzụlite ma rụọ ọrụ DApps ego n'elu usoro ntụkwasị obi, dịka ngọngọ na-enweghị ikike na usoro ndị ọzọ na-eme ka ndị ọgbọ (P2P). Ya mere, n'etiti ọtụtụ ebumnuche na / ma ọ bụ ọrụ, nke kachasị mkpa n'ime DeFi bụ ịmepụta ọrụ nchekwa ego, inye ndị ọgbọ ma ọ bụ ndị na-agbazinye ego na mgbazinye ego, ma mee ka akụrụngwa ego dị elu dị ka DEX, nyiwe ngosi, ahịa nkwekọrịta na amụma." Fuente.
DeFi na Open Source
Ọtụtụ ihe nwere ike kwuru banyere DefiOtú ọ dị, anyị abụghị ndị Ọkachamara Blog na mpaghara a, mana na-ekwu maka ya Defi y Meghee Isi mmalite, ọ bara uru ịkwụsị na nkọwa na-esonụ, nke anyị nwere ike ịghọta otu mmetụta dị mma nke nghọta, nchebe na nnwere onwe kedu ihe ọ na-enye anyị Free Software na Open Source na teknụzụ, mana ewere ya na ego:
na Defi dị ka "Mepee usoro okike ego" kwe ka owuwu nke obere ngwa oru na oru banyere uzo a blockchain akpan akpan, n'ụzọ dị otú a na ha nwere ike ikpokọta, gbanwee ma jikọta ha, dịka mkpa nke ndị ọrụ (ndị otu sonyere). Mgbe FinTech kwere nkwa njikwa ego na ọsọ ọsọ, Defi enye akara nke gị akụ ekele a nhazi mezue site na ike zuru nke teknụzụ blockchain.
Nke a, n'aka nke ya, na-agbakwa ume DApps mmepe rụọ ọrụ ọnụ iji mepụta ngwaahịa ego ọhụrụ, ka ị na-azụ emeghe iyi ogbugba ndu iji rụọ ọrụ site na mgbanwe mgbanwe, na-enyere ihe e kere eke nke ngwaahịa ego ọhụrụ, ntụkwasị obi, ngwa ngwa, nchebe na nzuzo na ha.
Maka ndị ọzọ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, anyị na-akwado ileta ihe ndị a 2 ọdịnaya bara uru na agụmakwụkwọ banyere Defi onye isi ya bu 2 Nhazi usoro ntanetị a maara nke ọma n'ọhịa nke Cryptocurrency Industry na Blockchain Technology: 1 njikọ y 2 njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «DeFi o Finanzas Descentralizadas», nke bu teknụzụ na-ewu ewu emeghe nke a na-eme gburugburu na nso nso a teknụzụ blockchain banyere ụwa ego, na kwa ụbọchị na-esiri ike karị n'ihi ịrị elu nke Ego; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Maka ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ nke a publicación, Akwụsịla kee ya soro ndị ọzọ, na ebe nrụọrụ weebụ kachasị amasị gị, ọwa, otu ma ọ bụ obodo nke netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ sistemụ izi ozi, ọkacha mma n'efu, mepere na / ma ọ bụ karịa echekwa telegram, signal, Mastodon ma ọ bụ ọzọ nke Nyefere, ọkacha mma. Chetakwa ileta ihu ulo anyi na «Ndokwa» inyocha ọzọ ozi ọma, nakwa isonyere anyị ukara ọwa nke Telegram site na DesdeLinux. Mgbe, maka ozi ndị ọzọ, ị nwere ike ịga leta nke ọ bụla Ọbá akwụkwọ dị n'ịntanetị dị ka OpenLibra y JEDIT, iji nweta ma gụọ akwụkwọ dijitalụ (PDF) na isiokwu a ma ọ bụ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » DeFi: Ego etinyere, ego mepere emepe
enweghị m xD dijo
Kwụsị ịsị "mepee emeghe," "oghere mepere emepe," na ihe ndị yiri ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke ahụ, n'etiti nke ahụ na ọtụtụ mgbasa ozi clickbait, yana isiokwu na-akwalite ngwanrọ na ọrụ ndị nwe.
Biko, n'ihi Free Software.
Zaghachi ka notengoxd
Pywal: Ngwa ọrụ na-atọ ụtọ iji hazie Terminals anyị
Debian na Fedora na-anwa idozi nsogbu ndị ahụ